အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းအပူဓာတ်လွှဲပြောင်းပရင်တာ? အကောင်းဆုံး အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းအပူဓာတ်လွှဲပြောင်းပရင်တာ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
ပုံစံ - ARP-450AF1
တစ်ခုတည်းသောအိတ် AUTO-အပူအအေး လွှဲပြောင်းခြင်း ပရင်တာအား ကျွေးမွေးခြင်း။
Interface ကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။.
မော်ဒယ် ပုံနှိပ်ရန်အိတ်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) အပူလွှဲပြောင်းပုံနှိပ်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ)(ဒဗလျူ*ဌ) အပူလွှဲပြောင်းပုံနှိပ်ခြင်းမြန်နှုန်း
(မီလီမီတာ/၎) Air Supply လိုအပ်ပါသည်။ ပါဝါလိုအပ်သည်။
အရှည် အကျယ် အထူ ဌ. ဒဗလျူ. ဇ.
ARP-450 AF1 30~290 ၆၀~၂၁၀ 0.၀၁~၀ယ်တယ်။.05 32*40
Continue တွင် 18C မုဒ် 80~450 100L/အနည်းဆုံး 5KG/CM2(0.5MPI) 150 KW 1P 110VAC သို့မဟုတ် 220VAC 1.1M 0.65M 0.33M
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/auto-feeding-thermal-transfer-printer.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ရာတွင်အပ်နှံသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ကုန်ထုတ်လုပ် အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းအပူဓာတ်လွှဲပြောင်းပရင်တာ ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းများကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်တန်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသောလျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များနှင့်နီးနီးကပ်ကပ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးများစွာတိုးတက်စေသဖြင့်, ဒီအတောအတွင်း, စျေးကွက်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ကျနော်တို့အမြဲလူ့-oriented, သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၏စီမံခန့်ခွဲမှုလမ်းညွှန်ကပ်လျက်ရှိ၏။
အကောင်းဆုံး အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းအပူဓာတ်လွှဲပြောင်းပရင်တာ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းအပူဓာတ်လွှဲပြောင်းပရင်တာ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ